Golaha Guurtida Somaliland oo guddi u saaray ka tala bixinta muddo kordhinta xukuumadda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Guurtida Somaliland oo guddi u saaray ka tala bixinta muddo kordhinta xukuumadda
Mareeg.com: Fadhi ay magaalada Hargeysa ku yeesheen Golaha Guurtida Somaliland ayay mudaneyaashu iskula qaateen in guddi balaaran oo ka kooban 29 xubnood loo saaro ka talo bixinta Muddo kordhinta Xukuumadda ee hor taala Golaha Guurtida.
Gudoomiyaha Guurtida, Saleebaan Maxamuud Aadan, oo fadhiga furay ayaa mudaneyaasha ku wargaliyay in shir gudoonku isla gartay in guddi loo saaro go’aanka goluhu ka qaadanayo Muddo kordhinta, iyadoo mudaneyaashuna ku taageereen.
Golaha Guurtida ayaa maanta laga filayay inay xilli kordhin u sameeyaan Xukuumadda Somaliland, balse waxey sheegeen iney bixiyeen guddi talabixin.
“Fadhi uu yeeshay Sihr-guddoonka Golah Guurtiddu 30/04/2015 kagana hadlay xubnihii loo magacaabi laha Guddi ahaan Muddo kordhinta Xukuumadda ee Golah hortaal, si ay Golahu ugu soo jeediyaan tallo ahaan waqtiga ku habboon ee laga dhigi karo Muddo kordhintaasi, ka dibna u Goluhu ku Go`aan qaadan-doono, ayaa lagu magacaabay Xubnahani” ayuu yiri gudoomiyaha golaha, Saleebaan Maxamuud.
Guddida doorashooyinka Somaliland ayaa bishii hore ee April si rasmi ah u sheegay inay dib u dhacday wakhtigii ay qabsoomi lahaayeen doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiillada.
Guddiga ayaa sheegtay in muddada ay ku qabsoomi karaan ay yihiin 1da bisha June ee sannadka dambe 2016.
Xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha intooda badan ayaa walaac weyn ka qaba in golaha Guurtiddu kordhinayo wakhti ka badan inta guddida Doorashooyinku soo jeediyeen.
Haddaba maadaama loo baahday in xukuumadda haatan jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Siilaanyo waqtiga loo kordhiyo ayaa Golaha Guurtida Somaliland saareen guddi arrintaas kasoo talabixiya oo ka kooban xubnahan:-
1. Sulaymaan Maxamuud Aadan, Guddoomiyaha Golaha.
2. Siciid Jamac Cali, Gudd ku-xigeenka 1aad ee Golaha.
3. C/raxmaan Sheekh Yuusuf Sh. Gudd ku-xigeenka 2aad ee Golaha.
4. Muxumed Aw Axmed Xaaji Aadan Xubin.
5. Xaaji Cabdi Xuseen Yuusuf Xubin.
6. C/qaadir Maxamed Xasan Xubin .
7. Siciid Xuseen Huruuse Xubin.
8. Mamduux Cusmaan Sheekh Xubin
9. C/qaadir Aw Xuseen Mire Xubin
10. Xasan Sh. Axamed Sh. Nuux Xubin
11. Cabdi C/laahi Xasan Xubin
12. Siciid C/laahi Yaasir Xubin
13.Axmed Daahir Maxamuud Xubin
14. Cawil Xuseen Axmed Xubin
15. Farxaan Ciise Ubaxle Xubin
16. Cawil C/laahi Caydiid Xubin
17. Axmed Nuur Aw Cali Aadan Xubin
18.Sul Isamaacil Sul.C/raxman Xubin
19. C/raxmaan Qawdhan Muxumed Xubin
20. Xuseen Madar Xoosh Xubin
21. Caydiid Cabdi Maxamed Xubin
22. Nuur Rayaale Khayre Xubin
23. Xasan Cumar Axmed Xubin
24. Dayib Xasan Axmed Faarax Xubin
25. Maxamed Jamac Abokor Xubin
26. Xirsi Ciise Jaamac Xubin
27. C/raxmaan Axmed Araaye Xubin
28. Maxamed Shire Faarax Xubin
29. C/laahi Ibraahim Habane Xoghayaha Golaha – Xoghayn
Akhri: Dalalka saxafiyiintu ugu xorriyadda badan yihiin iyo ugu caburinta badan
Ciidamada Taliyaaniga oo badbaadiyey in ka badan 300 tahriibayaal ah